Nisy ny fifamaliana, izay niitatra tamin’ny fangoronan’ny mpitandro ny filaminana ny sorabaventy nentin’ireo miaro ny fakana ny tanin’ny Malagasy, ka niafara tamin’ny savorovoro.
Nahazo fampiantsoana teny amin’ny zandary i Ninie Doniah sy olona efatra hafa, ny talata. Araka ny nambaran’ity mpanakanto ity dia fitarihana fanonganam-panjakana sy fanoherana ny tetikasan’ny filoham-pirenena no niantsoana ka nanaovana famotorana azy ireo.
Nilaza i Ninie Doniah “Zahay tsy contre ny projet Présidentiel fa … ambilanarô taninay “Royal Beach” ataon'ny Fanjakagna fitaovagna andravagna tany … Nikaiky DG SIRAMA zaho dia izao ny valiny hoe efa vita titre sy borne amin'ny Royal Beach io tany io … moa va mpivarotro tany ny SIRAMA, fa tsy hoe manodina ny fary ho siramamy ndraiky toaka, izay Bail nifanarahagna tamin'ny Mpanjaka… Gaga zahay ?”.
Navotsotra ny talata hariva ihany izy dimy mianadahy nanaovana famotorana ireto.
Nilaza i Ninie Doniah fa tsy mihemotra manoloana ny fandrahonana na amin’ny endriny inona na ahoana, ho fiarovana ny tanin’ny Malagasy.